डाक्टरकै घरमा छैन शौचालय ! - Nepal News - Latest News from Nepal
डाक्टरकै घरमा छैन शौचालय !
सुनसरी, बैशाख २३– अरुलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञानज्ञुनका कुरा सिकाउने र नियमित स्वास्थ्य चेकजाचमा ध्यान पूर्याइरहने चिकित्सककै घरमा शौचालय छैन भन्दा पत्याउन अली गाह्रो होला । तर, अब पत्याउनै कर लाग्ने भएको छ !
सुनसरीको पूर्व कुसहाका एक स्थानीय चिकित्सकले आफ्नो घर दुइतले चिटिक्कको बनाएका छन् तर शौचका लागि भने बारीको पाटा र छरछिमेकीको शौचालय प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । पूर्वकुसहा ४ का डाक्टर आसाराम चौधरीको घरमा शौचालय नभएको पाइएको हो ।
सुनसरीको इटहरीबाट गएको सरसफाइ अभियानकर्ताहरुको अनुगमन टोलीले डाक्टरकै घरमा शौचालय नभएको पाएपछि तत्काल बनाउन निर्देशन दिएका छन् । पूर्वकुसहाको मुख्य बजार क्षेत्रमा निजी क्लिनिक सञ्चालन गरेर बसेका आसारामले क्लिनिकमा आइपुगेका अनुगमन टोलीलाई आफ्नो अध्याधुनिक शौचालय भएको झूट बोले तर अनुगमन टोलीले बुझ्दै जाँदा शौचालय नै नभएको पाइएको थियो । अनुगमन टोलीले शौचालय नभएको पुष्टि गरेपछि भने उनले घरमा फुर्सद नभएकोले बनाउन नभ्याएको बताए ।
सो क्रममा उनले रातको समयमा शौच आए बारीको पाटामा र अरुबेला भए क्लिनिक र छरछिमेककहा गएर काम चलाउने गरेको बताए ।
पूर्वकुसाह र इटहरी उपमहानगरपालीका बाट बातावरण सरसफाइको टोलीले डाक्टरलाई आगामी एक साताभित्र आफ्नो घरमा पनि शौचालय बनाउन निर्देशन दिएका छन । आगामी २५ गते पूर्व कुसहालाई खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरीने कार्यक्रम अन्र्तगत इटहरीबाट खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन अन्तरगत बातावरण बिशेषज्ञ टोली र पूर्वाकुसाह गाविशका प्रतिनिधीहरुले सो गाविशमा हालै अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमनको क्रममा अधिकांसले पक्की चर्पी निर्माण गरेको पाइएको थियो भने केहीले भने बनाउन बाकी रहेको र छिट्टै बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
लामटाङको हिमपहिरोमा परेकी छो जाङ्मो भन्छिन्, तीन घाइते छोराछोरी लिएर ओढारमा रात काटेँ
जनताले सोधे–‘राहत कहिले पाइन्छ सरकार ?’, प्रधानमन्त्रीले भने–‘म सोध्छु है’